Maraykanka oo dabagal ku sameeyay muwaadiniinta Sweden | Somaliska
Warbixin uu qoray wargeyska SvD ayaa lagu sheegay in sir doonka Maraykanka ay si qarsoodi ah ay daba gal ugu sameeyeen dad ay uga shakiyeen waxa loogu yeero argagixisada iyagoon fasax ka haysan dowlada Sweden. 2 nin oo Maraykan ah ayaa la sheegay in ay dabagal ku hayeen dad Sweden ku nool iyadoo markii la ogaaday ay ragaas isaga bexeen dalka. Wargeyska ayaa sheegay sidii Pakistan oo kale in Sweden aan waxba laga ogeysiin hawsha socotay oo lagu dabagalay dad looga shakiyay argagixiso. Dadkaan ay raadsanayeen ayaa la sheegay in sidoo kale ay baaritaan ku haysay Hayada amaanka ee Sweden (Säpo). Maamulka hayadaas ayaa diiday in ay jawaab ka bixiyaan eedeynta cusub iyagoo ku celceliyay wadashaqeynta kala dhaxeysa Maraykanka. Raysal wasaaraha oo arintaan wax laga waydiiyay ayaa sheegay in uusan war ka hayn arintaas balse waxa uu sheegay in uusan filayn in arintaan la sii daba gali doono waayo Maraykanka iyo Sweden waxaa ka dhexeeya xiriir adag. Khuburada amaanka ayaa sheegay in arintaan ay jabineysa dhamaan sharciyada caalamiga ah oo ay mamnuuctahay in wadan uu wadan kale muwaadiniintiisa daba gal ku sameeyo iyadoon la ogeysiin. Ma ahan markii ugu horeysay ee maraykanka lagu eedeeyo in uu basaasid ka sameeyay Sweden, iyadoo dhowr bilood ka hor ay soo baxday in safaarada Maraykanka ay si qarsoodi ah u kaydisay warbixinada muwaadiniinta Sweden taasoo markii dambe baaritaankeeda layska dhaafay.
Warbixin uu qoray wargeyska SvD ayaa lagu sheegay in sir doonka Maraykanka ay si qarsoodi ah ay daba gal ugu sameeyeen dad ay uga shakiyeen waxa loogu yeero argagixisada iyagoon fasax ka haysan dowlada Sweden. 2 nin oo Maraykan ah ayaa la sheegay in ay dabagal ku hayeen dad Sweden ku nool iyadoo markii la ogaaday ay ragaas isaga bexeen dalka.
Wargeyska ayaa sheegay sidii Pakistan oo kale in Sweden aan waxba laga ogeysiin hawsha socotay oo lagu dabagalay dad looga shakiyay argagixiso. Dadkaan ay raadsanayeen ayaa la sheegay in sidoo kale ay baaritaan ku haysay Hayada amaanka ee Sweden (Säpo). Maamulka hayadaas ayaa diiday in ay jawaab ka bixiyaan eedeynta cusub iyagoo ku celceliyay wadashaqeynta kala dhaxeysa Maraykanka.
Raysal wasaaraha oo arintaan wax laga waydiiyay ayaa sheegay in uusan war ka hayn arintaas balse waxa uu sheegay in uusan filayn in arintaan la sii daba gali doono waayo Maraykanka iyo Sweden waxaa ka dhexeeya xiriir adag.
Khuburada amaanka ayaa sheegay in arintaan ay jabineysa dhamaan sharciyada caalamiga ah oo ay mamnuuctahay in wadan uu wadan kale muwaadiniintiisa daba gal ku sameeyo iyadoon la ogeysiin.
Ma ahan markii ugu horeysay ee maraykanka lagu eedeeyo in uu basaasid ka sameeyay Sweden, iyadoo dhowr bilood ka hor ay soo baxday in safaarada Maraykanka ay si qarsoodi ah u kaydisay warbixinada muwaadiniinta Sweden taasoo markii dambe baaritaankeeda layska dhaafay.